राति निन्द्रा लाग्दैन भने थाहा पाईराख्नुस् यी कुरा !::Pathivara News
राति निन्द्रा लाग्दैन भने थाहा पाईराख्नुस् यी कुरा !
हामीहरु दैनिक ८–९ घण्टा सुत्ने गर्छौं तर नार्कोलेप्सी भएकाहरु त्यो भन्दा धेरै बढी सुत्ने हुन्छन् । साथै कोहीकोहीलाई दिउँसो निद्रालाग्ने भनेको धेरै खाना खाएपछि हो । यसमा मानिसलाई एक्कैछिन मात्र निद्रा लाग्छ र फ्रेस हुन्छ । दिउँसो निद्रा लागेर दैनिक कार्यमा धेरै असर ग¥यो भने केही औषधिहरु खानुपर्ने हुन्छ तर नेपालमा यो औषधि हालसम्म उपलब्ध छैन । यदि दिउँसो निद्रा लाग्छ भने सकमेसम्म ननिदाउनु नै उचित हुन्छ । निद्रासँग सम्बन्धित कस्ता समस्याहरू देखिन्छन् ? धेरै रोगहरु निद्रासँग सम्बन्धित हुन्छ । डिप्रेशन, एन्जाइटी जस्ता बिभिन्न रोगहरुमा निद्रा नै पहिलो समस्या हो ।
डिप्रेशन, एन्जाइटी तथा अन्य मनोवैज्ञानिक रोगको पहिलो लक्षण नै निद्रा नलाग्नु हो । यसबाहेक रोगलाग्दा, चिन्ता, दुखाई, डर, मानसिक तनाव आदीका कारणले पनि निद्रा नलाग्ने हुनसक्छ । कुनै रोग नलागि विभिन्न कारणले मानसिक तनाव हुने र त्यसले निद्रा नलाग्ने हुनसक्छ । निद्रा नलाग्ने समस्याहरु पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् । कहिले काँही थकानले सुत्न लागेपछि १÷२ घण्टासम्म निद्रा नलाग्ने वा २ देखि ३ घण्टापछि निद्राखुल्ने र फेरी निद्रा नलाग्ने हुन्छ । राती निद्रा खुलेर पुनः सजिलै लाग्छ, भने यो रोग भने होइन । निद्रामा बरबराउने किन हुन्छ र बरबराउनु रोग हो ? निद्राको साइकल हुन्छ । त्यो साइकल पार गर्दै जाँदा सपनाहरु आउने हुन्छ । सबै मानिसलाई प्रत्येक दिन सपना आउँछ तर जसलाई निद्राको समस्या हुन्छ, त्यस्ता मानिसले धेरै सपना देख्ने हुन्छ । किन भने धेरै जसो सपनाहरु गहिरो निद्रामा देखिन्छ ।
गहिरो निद्रामा आएको सपना सम्झिन सकिदैन । तर कम गहिरो निद्रामा आउने सपना मात्र सम्झने हुन्छ । त्यसैले कहिलेकाँही सपनामा आउने कुराहरु बरबराउने हुन्छ । निद्राको कारणले नै बरबराउने हुन्छ । यो रोग होइन, यस्तो समयमा मानिसलाई पनि थाहा हुदैन । यो सपनासँग आउने मात्र हो । निद्रामा दाह्रा किट्ने कस्तो समस्या हो ? यो पनि निद्रामै हुने भएको हुँदा मानिसलाई थाहा हुदैन । यो पनि रोग होइन । यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुहुदैन । निद्राको समयमा ऐठन किन पर्छ ? सुतेको समयमा शरीरका अंगहरु चल्ने हुन्छ । तर कहिले काँही कुनै अंगमा प्रेसर प¥यो भने त्यस ठाँउमा राम्रोसँग रक्तसंचार हुन पाउदैन । त्यस समयमा श्वासप्रश्वास बन्द भएको जस्तो हुन्छ ।
व्यक्ति आफैलाई निद्रामा हिँडेको थाहा हुदैन । यो समस्या गहिरो निद्रामा नपुग्दै सपनाको कारणले हुन्छ । यस्तो समस्यामा व्यक्तिलाई गहिरो निद्राको लागि औषधि पनि दिन सकिन्छ । यस्तो समस्या भएकाहरुले झ्याल, ढोकाको चुक्कल राम्रोसँग लगाउने जस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ । यसले शारीरिक असर गदैन तर कहिले काँही दुर्घटना हुन जान्छ । निद्रा लगाउने उपाएहरु के के हुन् ? जसलाई राती निद्रा लाग्दैन त्यसले राती सुत्ने र बिहान उठ्ने समय एउटै बनाउनु पर्छ ।
चुरोट/सुर्ती सेवन नगर्ने
तनाव घटाउने # रोगको कारणले हो भने उपचार साभार -डाक्टर सुबोध पोख्रेल